Atiny 4.0 Avy Mahagaga ka hatramin'ny maro. Martech Zone
Talata, Septambra 4, 2012 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Tsy azoko antoka fa tena mivoatra tokoa ny atiny satria teôria ity Infographic ity, saingy mino aho fa misy ny fifaninanana mahatalanjona ho an'ny atiny lehibe ary ny haitao dia mivoatra haingana izay mitaky orinasa hampiasa vola amin'ny atiny lehibe. Na… raha ny Content 4.0 no mamaritra azy… Mahatalanjona ho an'ny maro!
From Fanalanjona 2012: Fisamborana tany lehibe no miseho ho an'ny mpanjifa niomerika. Miova haingana ny maodelin'ny orinasa. Ny teknolojia manomboka amin'ny fandoavam-bola amin'ny finday ka hatramin'ny fifanakalozana bitika dia novolavolaina ho paikady fidiram-bola fanampiny amin'ny doka sy karama. Ny "media" dia tsy misy afa-tsy atiny fotsiny, fa koa varotra, fandoavam-bola ary sehatra.
Infografikan'i FANAFAHANA, kaonferansa novokarin'ny Business Insider tany New York ny 27-28 novambra 2012.
Marketing Tech eo an-toerana
Sep 5, 2012 amin'ny 6: 07 AM
Raha ny marina, miaraka amin'ny Media Sosialy, dia mifamatotra ny tsirairay, ary afaka manaparitaka ny atiny mora kokoa ianao. Lasa viral.
5 Septambra 2012 à 1:02
Mila mamorona infografika vitsivitsy aho ASAP, tsara ny anao!
5 Septambra 2012 à 3:23
Salama Steven, avy amin'ny infografika rehetra izahay DK New Media: http://www.dknewmedia.com/